Miomana amin’ny fahatongavan’ny valanaretina i Mozambika na dia tsy mbola nisy aza ny tranga COVID-19 voamarina · Global Voices teny Malagasy
Marobe ny vaovao diso miparitaka amin'ny tambajotra sosialy
Voadika ny 02 Avrily 2020 5:20 GMT
Vakio amin'ny teny English, Español, Français, عربي, Italiano, Português
Fampitandremana avy amin'ny filohan'ny Repoblikan'i Mozambika eo amin'ny fonon'ny gazety Público, tamin'ny 9 Martsa 2020. Saripikan'i Dércio Tsandzana, CC-BY
Zahao ny fitantarana manokana ato amin'ny Global Voices momba ny fiantraikan'ny COVID-19 manerantany.
Amin'ny firenena miisa 30 mahery ao Afrika izay ahitana trangana COVID-19 voamarina dia efa miomana i Mozambika amin'ny mety hisian'ity aretina vaovao izay nahatratra olona miisa 250.000 eran-tany ity ary nahafatesana olona miisa 11.000 [tamin'ny fotoana nanoratana ny lahatsoratra].
Raha mbola tsy nahitana tranga tao Mozambika, efa nahitana izany ireo firenena miisa efatra manodidina azy: Zambia (2), Afrika Atsimo (202), Fanjakan'i Eswatini (1), ary Tanzania (6).
Nanambara ny drafitra momba ny famehezana ny fiparitahan'ny virosy sy ny fampihenana ny fiantraikan'izany ny governemanta Mozambikana. Ao anatin'izany, ohatra, ny fametrahana ireo foibe fanokana-monina any amin'ireo faritany miisa 11 ao aminy .
Nanambara fepetra vitsivitsy ny filoha Filipe Nyusi na dia mbola tsy nambara ny fanakatonana ny sisintany aza izy, ao anatin'izany ny:
Tsy maintsy atao ny fihibohana mandritra ny 14 andro ho an'ny olona tonga avy any amin'ny firenena heverina fa hamindra ny valan'aretina.
Fandrarana ny fikarakarana na fandraisana anjara amin'ny karazana hetsika rehetra misy olona 300 mahery.
Fampiatoana ny dia iraisam-pirenena rehetra ho an'ireo mpitondra fanjakana.
Niantso ny hanakatonana ny sisintany ny antoko mpanohitra lehibe indrindra, Renamo, izay nolavin'ny Minisitry ny Fahasalamana Armindo Tiago toy izao:
Efa fepetra faratampony ny fanakatonana izay tsy tokony ampiasaina raha tsy misy zava-doza mitranga tampoka kanefa tsy izany no zava-misy eto. Na ankehitriny aza, tsy mbola nanidy ny sisintaniny i Shina na dia naniboka tanàndehibe sasany aza izy ireo.
Nanatanteraka hetsika fisorohana tany an-tsekoly ihany koa ny Minisiteran'ny Fahasalamana:
Niara-nanao fanentanana tao amin'ny Lisea Francisco Manyanga tao Maputo androany ny Minisitry ny Fahasalamana Armindo Tiago niaraka tamin'ny Minisitry ny Fampianarana sy ny Fampandrosoana Ara-tsosialy Carmelita Namashulua ary ny solontenan'ny OMS, DJamila Cabral, mpampianatra momba ny fepetra fisorohana #Coronavirus
Saingy nisy hafatra somaiso nalefa tamin'ny karatra SIM maro tany Mozambika niaraka tamin'ny torohevitra izay hitan'ny olom-pirenena maro fa tsy mahomby.
Nahazo ireo hafatra ireo ve ianao?
Hafatra voalohany ao amin'ny sary: “An'ny fianakaviamben'ny virosy ny Coronavirus izay mahatonga ny aretin'ny taovam-pisefoana ary miovao avy amin'ny gripa mahazatra ka mety hivadika ho ratsy kokoa toy ny areti-tratra (pneomonia)”
Hafatra faharoa: “Mitovy amin'ny gripa mahazatra ny fisehon'ny coronavirus toy ny: fanaviana, koha-maina, lelo, areti-tenda, aretin'andoha, aretin-kibo ary ny fahasarotana miaina. ”
Nanakiana ny votoatin'ny hafatra ilay mpahay tantara sady mpandinika politika Egídio Vaz:
Ity ny vola nolaniany tamin'ny fanentanana tsy mahomby. Nahazo ity hafatra nandoavan'ny Minisiteran'ny Fahasalamana vola ity aho mba hampianatra ahy ny atao hoe #coronavirus.
Tsy mahomby ity hafatra ity noho ireto antony manaraka ireto:
1. Tsy ilaina ny voambolana teknika. Ankoatra ny filazalazana mahazatra dia tsy mahaliana ny olom-pirenena loatra izany. Mila hafatra hanampy azy handray ny fepetra ilaina, ny fihetsika tokony atao ny olom-pirenena raha sendra ny toe-javatra tsy azo antoka ary noho izany antony izany no tokony hamantarany fa zava-dehibe ny fomba fampahafantarana torohay na dia kely monja aza.
2. Tokony nilaza fotsiny ny hafatra fa tsy misy fanafodiny ny aretina [SIC] coronavirus ary miseho amin'ny alàlan'ny fanaviana, ny olan'ny taovam-pisefoana na ny gripa. Mety tsy hanaiky ny fomba hamaritako azy ny dokotera saingy ny mba handehanan'ny olona any amin'ny hopitaly mba hanaovany fitiliana raha ilaina izany no tiako hatongavana amin'izany famaritana izany. Noho izany, tokony hoe “mandehana any amin'ny tobim-pahasalamana akaiky indrindra mba hanao fitiliana” ny ampahany tamin'ilay hafatra faharoa.
3. Araka izany, azo antoka fa tokony hiandry ny hafatra manaraka aho hilaza amiko izay tokony hataoko…
Ao anatin'ny fahamehana isika izao. Tsy fotoana hanaovana fialamboly izao.
Nohazavain'ny Minisitry ny Fahasalamana ihany koa ny momba ny honohono fa mahatohitra kokoa ny COVID-19 ny mainty hoditra, filazana natao tao amin'ny tambajotra sosialy saingy tsy misy porofo ara-tsiantifika manamarina izany.
Nanao antso tany amin'ny tompon'andraikitra iraisam-pirenena sy diplaomatika maromaro ihany koa ny manampahefana mba hanohana azy ireo raha toa ka misy ny fihanaky ny aretina ao amin'ny firenena.
Nandritra izany fotoana izany, nandrisika ny Mozambikana hanao fanentanana bebe kokoa ny filoha Filipe Nyusi mba hampitsaharana ny fiparitahan'ny valan'aretina:
Olana momba ny fiarovana ny COVID-19. Noho izany, miangavy anareo aho hampitombo avo roa heny ny ezaka amin'ny fisorohana sy ny fitandremana.
Niparitaka tao amin'ny WhatsApp tao Mozambique ny hafatra sandoka lazaina fa avy amin'ny UNICEF. Nanazava ny raharaha tao amin'ny Twitter ny fikambanana:
Tsy nandefa taratasy fampahafantarana momba ny #coronavirus tamin'ny alàlan'ny WhatsApp tao Mozambika ny UNICEF. Raha mila fanazavana momba ny fomba hisorohana ny COVID19 dia anontanio MAIMAIMPOANA ny sehatra PENSA amin'ny alàlan'ny antso *660 # na antsoy MAIMAIMPOANA ny Alô Vida ao amin'ny 800149, 82149 sy 84146.
Nandiso ny vaovao tsy marina momba ny fisian'ny valan'aretina izay niparitaka tao amin'ny tambajotra sosialy tato ho ato ihany koa ny governemantan'i Mozambika, tamin'ny alàlan'ny mpitondra teniny:
Tandremo: Tsy misy trangana Coronsavirus voamarina aty Mozambika, araka ny nambaran'ny mpitondratenin'ny governemanta tamin'ny fiafaran'ny fivoriana tsy ara-potoana tamin'ny Filankevitry ny Minisitra. “Tsy marina ny vaovao miely avy amin'ny olona te hanakorontana”
Taorian'ireo toromarika ireo, nanapa-kevitra ny hanafoana ny fivoriana izay nokasaina atao ny 20-22 Martsa ny antokon'ny fitondrana Frelimo:
Ho fanajana ny fepetra nambara momba ny coronavirus dia nanapa-kevitra ny hanemotra ny fotoam-pivorian'ny Komity Foibe izay saika atao ny faha-20 ka hatramin'ny 22 Martsa amin'ny fotoana manaraka ny Komity Politikan'ny Antoko.
Nandritra izany fotoana izany, nizara sarin'ny sarontava afaka vokarina ao an-toerana ilay mpanao gazety Rafael Machalela:
Mandeha lavitra kokoa ny Mozambikana. Tiako.